Fibre optic ikhebula workshop - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Uhlobo lukaJera Fiber ukufeza amathuba okukhiqiza nokunikeza isisombululo esiphelele sokwakhiwa kokusatshalaliswa kwamanethiwekhi ezokuxhumana ngocingo. Kusukela ngonyaka ka-2019, uJera wayenobuchwepheshe bokukhiqizwa kwentambo ye-fiber optic.
I-workshop yokukhiqiza intambo kaJera fiber optic inezintambo ezimbili zokukhiqiza ikhebula. Imishini yolayini wekhebula ingumkhiqizo odumile wamazwe omhlaba. IJera fiber workshop ikhiqiza ikakhulukazi ikhebula le-FTTX ngezinhlobo ezimbili:
-Outdoor (aerial) imizila yokufaka
-Indoor ukufakwa imizila
Ikhono lokukhiqiza lale mizila emibili lingu-500km ngosuku, iziqukathi ezi-5 ngenyanga.
Indlela yephakeji ihlala i-1km isigubhu sokhuni ngasinye kanye nebhokisi. Senza ngezifiso ukupakisha indlela.
Sihlola izinto zokusetshenziswa ezingenayo ngokuya ngezinga le-ISO 9001: 2015 ne-CE.
Izintambo zethu ze-fiber optic zenziwe nge-G657A1, i-A2 fiber core, i-FRP kanye nezinto zensimbi zensimbi, isimo sezulu kanye nepulasitiki ye-LSZH emelana ne-UV.
Umugqa weJera uyakwazi ukuthuthukisa imikhiqizo emisha noma ukwenza ngokwezifiso uhla lomkhiqizo lwamanje ukuze kube nokuncintisana okukhulu, futhi ukwazi ukunikeza amakhasimende ethu okunikezwayo okufanelekile nekhwalithi ephezulu.